Indonesia in Focus: Favorite njem nleta ntụpọ nke ụwa.
Favorite njem nleta ntụpọ nke ụwa.
The na-agba ịnyịnya na-okokụre (379)
(Part narị atọ na iri asaa na itoolu), Depok, West Java, Indonesia, September 6, 2015, 1:40 pm).
Ná mmalite 1982, mgbe m kwụsịrị dị ka a obodo na-eje ozi Directorate General nke Higher Education Ministry of Education na Culture, mbụ m oge eleta ma ọ bụ na-ejegharị ná mba ọzọ, n'ihi na ha chọrọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ na California State University, Fresno, California.
Duru nna m na nne na iteghete na ụmụnna m site Halim Perdana Kusuma International Airport, mgbe Indonesia anaghị nwere Soekarno-Hatta ọdụ ụgbọ elu. Mgbe m banyere ụgbọelu nke Japan Airlines (JAL) Jumbo 747, a nnukwu abụọ-larịị ụgbọelu ụzọ, ụzọ stopover na Changi Airport, Singapore na Narita Airport, Tokyo, tupu iso kwupụta San Francisco Tokyo ụgbọ elu. Site San Francisco m na-abanye ụgbọelu obodo nke na Fresno Air California. Na ọdụ Fresno, m na ekemende m nne na nna kuchiri Bob ogwe na nwunye ya (Dee) n'ihi na m na-ebi na ezinụlọ a ruo ọtụtụ ọnwa, tupu m kwagara na ulo bụ n'akụkụ aka Masjid Fresno, nke na nsogbu naanị 50 mita efep kampos nke California State University, Fresno.
Kwere nghọta Indonesia (Jakarta), mgbe ọ bụghị oge a dị ka ọ bụ ugbu a, ọ bụghị ọtụtụ malls (ibu ahịa), e nweghị ụzọ ọnụ ọgụgụ, n'ihi ya, mgbe m kwụsịrị n'ụzọ na-aga na Changi Airport ịgbanwe ụgbọ elu JAL ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nanị awa atọ, m na-eji gburugburu ọdụ ụgbọelu Changi , Mgbe oge a Changi ọdụ ugbua, e nwere ụzọ na-eje ije, akpati ụgbọelu akwa mgbago na-ekwo ekwo shopping mgbagwoju jupụtara a dịgasị iche iche nke ngwaahịa na-adịghị ekesịpde Halim Perdana Kusuma.
M enwe mmasị n'ebe kecanggigan na mmalite oge a na-Changi ọdụ ụgbọ elu, na-amasị m na-apụta nke a nnukwu obodo nta (Jakarta), kwupụta obodo ala dị ka Singapore. M gawa Tokyo si Singapore, ukem ini nke ozi m ga-esi na ụgbọelu, ọ bụla onye mba ọzọ nke na n'ụzọ na Tokyo, e nyere ha a free visa ileta Japan ruo ụbọchị atọ. Onye ọ bụla peumpang JAL kwupụta mba ọzọ na n'ụzọ na-aga na Tokyo, ọdịda site JAL ụlọ ọrụ free ọnụnọ ruo ụbọchị atọ na Hotel Nikko Narita.
M na-eji ohere ileta dị iche iche njem nleta ụlọ ọrụ dị na obodo Tokyo. Mgbe mbụ ọ kwụsị na Narita ọdụ banyere mmiri, nke dị intermittent oyi, ebe a na-adị m a echiche nke jụụ (oyi) e akpa ke snowy obodo dika Japan. Site Narita ọdụ, anyị banyere n'ụgbọ a ụgbọ ala mgbagharị majors obodo Tokyo (chi ọbụbọ obodo), ruo mgbe chi ọbụbọ obodo obodo Tokyo, anyị na-ịdenye na njem gị n'ụlọnga Obodo na-amanye anyị anya na ndị dị iche iche njem nleta nkiri na Tokyo, sitere na site ebili NHK Tower, nọkwasị a ụgbọ mmiri njem osimiri na-ekewa obodo Tokyo, ebe nka nke na-eme wuru ib, Japan Emperor n'obí, ebe Warung tii, na ndị ọzọ na-eme njem nleta na ọnọdụ. M na-enwe mmasị si Tokyo (ugbu a, nwere a bi na nke nde mmadụ 40, ya net otu ugboro, nakwa dị ka obodo ndị ọzọ m mgbe gara dị ka Osaka. Site Osaka ka Tokyo anyị a ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè na-agba ịnyịnya. Tokyo ezie na ụmụ mmadụ bijupụtara, adịghị m ezute mkpọchi n'okporo ụzọ na (okporo ụzọ Jam) , eleghị anya n'ihi na Tokyo ugbua nwere a ọkaibe ọha iga usoro, sitere na site na ụzọ ụgbọ oloko (sub ụzọ), monorail ụgbọ oloko na ndị ọzọ na ọha iga ụlọ ọrụ nwere ezi ihe na haziri nke ọma okporo ụzọ.
Ndị ọzọ nlegharị anya njem m mere bụ na sidelines nke okpomọkụ, na-emekarị campuses na ọnwa nke June (okpomọkụ) ụmụ akwụkwọ pụrụ-apụ, na n'ihi na ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịnọgide na mahadum (mkpụmkpụ-okwu) na-ekwe. Unversitas na-emekarị na-amụ na US e nwere ebe anọ semesters, oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ, mmiri, okpomọkụ, na ụbịa ọkara nke oge. N'oge okpomọkụ ọkara afọ agụmakwụkwọ na 1983, m manfatkan na-eje ije gburugburu America. Early ke ndaeyo m hitchhiked amụrụ onwe ụmụ akwụkwọ si Malaysia (Hishamuddin), ọ na-amụ na Fresno-efu kama Mara mfọn. Site Fresno ka San Francisco na-awa atọ, otu n'ime ịpụ iche nke obodo a bụ ije nke ụlọ bi, e mmetụta site architectural omenala Germany, France, Netherlands, Ireland na ọdịbendị nke European si ọzọ, ebe ọ maara na obodo bi mmadụ na-abịa si n'ọdịbendị dịgasị iche nke Europe , nakwa nke China (China Town), na Philippines na ọtụtụ mba ndị ọzọ.
Site San Francisco anyị inyocha California n'ụsọ oké osimiri, obodo nke na Los Angeles, banyere awa ise, na obodo a anyị na-Disney Land na ọtụtụ ndị ọzọ njem nleta na saịtị. M mgbe were obodo nke na San Diego, ebe a anyị nwere ike ịhụ Oké Osimiri Ụwa na ndị ọzọ na mmiri njem. Ọnwa abụọ na atọ n'oge okpomọkụ m gbalịrị njem iji a ụgbọ ala (Grey Hound), na oge tiketi irè tiketi ọnwa abụọ, nke pụtara na oge tiketi a anyị pụrụ ịgbanwe-mgbanwe ụgbọ ala n'ebe bọs na ọnụ na-enweghị ịzụ a ọhụrụ tiketi. Itineraries anyị na-Fresno ka Los Angeles, si Los Angeles anyị gawa Tucson na obodo nke Phoenix na Arizona, mgbe ahụ ka Dallas na Houston, Texas, na Texas anyị tinyere isi obodo nke na El Paso, El Paso, anyị gafere n'obodo Trijiudad Juarez (Mexico). Site Texas anyị tinyere isi Albuqaque, Alabama tupu n'isi ka Missouri, ma gaa n'ihu Virginia, obodo nke Philadelphia, tupu obodo New York. Obodo ọ bụla na njem nleta saịtị na steeti anyị na-ewere oge ịhụ ya, mgbe ụfọdụ, n'ihi na e nweghị ọha iga anyị na-akwụsị onye kemdaraan ka njem nleta saịtị (hijacking).
N'oge ahụ, mba ọzọ njem nleta na-ka kwere ka ịrị akpụrụ akpụ nke Liberty elu na isi nke ndị akpụrụ akpụ (a machibidoro iwu). Mgbe ọ bụ ka e nwere WTC ejima ụlọ, n'elu n'ala na-nyere maka njem nleta. Tupu Philadelphia, anyị nwere ike ileta Washington DC. N'oge ogologo njem na m dị nnọọ na-ehi na ụgbọ ala arau ọdụ ụgbọ ala, dị nnọọ ahapụ ndị m stof na a mkpuchi n'ebe ahụ, na ụlọ mposi maka asa ahụ n'ọdụ ebe a. M anọ n'abalị (anọ na nkwari akụ), nwere mgbe ọ bịarutere na New York, na-anọ na Youth Ụlọ Mbikọ onye-iri, akwụkwọ ikike ngafe na ihe onwunwe edebe n'ihu Office. Kwere nghọta ụlọ nwere site njem nleta nwa okorobịa si France, Germany, Mexico na mba ndị ọzọ, (oge ọ na-efu $ 3 kwa abalị ọnụnọ. Nnọọ ọnụ karịsịa mgbe ọnụego mgbanwe bụ $ 1: RP 500, -
Mgbe n'obodo Memphis anyị hụrụ n'ụlọ mere ka naa Presley Museum. Na Grey Hound Bus Tour anyị na-ahapụ Chọpụta na ndịda States New York, n'ụlọ Chọgharịa ugwu Amerika tupu ya alọghachi na Fresno. N'adịghị ka ndị United States, nke dị obosara (50 States), mgbe ndị mba Europe ndị dịtụ obere mba, dị ka mba m mgbe gara dị ka Netherlands, Germany, Austria, Hungary, na Spain. A na obodo a anyị letara tempay ọtụtụ nkiri, dị ka Berlin, Humburg, Amsterdam, The Hague, Budapest, Vienna, Madrid, Sevilla, na ndị ọzọ na-eme njem nleta ọnọdụ dị ka ebe Islam ozugbo chịrị alaeze dị Spain na ndị ọzọ na-eme njem nleta na ọnọdụ.
Njem na US bụ dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị na-eji ụgbọ ala, na Europe anyị na-eji ọzọ ụgbọ oloko. Ọ bụrụ na n'oge US anyị ma ọ bụrụ na chọrọ iri nri kọsha nri anyị na-aga ụlọ ahịa (Obere ahịa) nke ndị obodo Muslim ma ọ bụ a Muslim si Pakistan, India na Middle East na North Afrika, mgbe ahụ, na Europe maka Muslim njem nleta na-emekarị gaa retaurant (ụlọ oriri na ọṅụṅụ) na jisiri site Obodo Alakụba ma ọ bụ Alakụba nke Turkish nrida e n'ọtụtụ ebe agbasawo Europe, karịsịa Germany na France.
Favorite njem nleta ntụpọ na duna
Ezumike bụ na-nnọọ obi ụtọ na ihe, karịsịa ma ọ bụrụ na-eme atụmatụ na-emefu ha ememe ná mba ọzọ. Ọfọn ebe m ga-atụle njem nleta ebe nke mmasị gburugburu World.
udara mba nza nke akpọkwa Njem Japan ga-fun. E nwere nnọọ ọtụtụ ebe nke Japan ndị na-akpali ma uru a nleta. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-n'ebe ahụ, e nwere nnọọ ọtụtụ nke dugharịrị ọrụ nke ga-eduga gị ka ị na-enwe mma nke Japan. 1.Ueno Park na ama Japanese udara okooko osisi ndị mara mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ enwe mma nke a ifuru, abịa Ueno Park na mmiri nke ruru gburugburu March ka May. Ueno Park bụ ndị kasị ama ebe na kemgbe saịtị nke Japan kasị achọsi ike njem nleta na-eme hanami, ya bụ a picnic mgbe ụtọ okooko nke udara okooko.
2. Fuji-Q Highland Tourism Japan a otu ụdị nke ntụrụndụ ogige ntụrụndụ na-eje ozi ndị kasị akpali akpali agafe, otu onye nke bụ a igwe na-agba okirikiri na dị nnọọ elu na ogologo trajectory. Ueno Park bụ ndị kasị ama ebe na kemgbe saịtị nke Japan kasị achọsi ike njem nleta na-eme hanami, ya bụ a picnic mgbe ụtọ okooko nke udara okooko.
3. Disney Resort, Tokyo An ogige ntụrụndụ wuru na obodo Tokyo, Nza nke agafe na anyị nwere ike na-enwe ebe a, ee eleghị anya ọ bụghị dị iche nke ukwuu site n'aka ndị nọ Dufan Ancol, Jakarta, Indonesia ntụrụndụ onye aha nwere ike-adịghị iche na pemaianan Air,-efe efe, Coster, pụrụ ịbụ nanị otu ọnọdụ na-eme ka ọ na ihe mara mma na Japan. Ma mgbe anya site na aha "Disney" yiri ihe zuru ezu.
The Netherlands na-abụghị nanị mara maka windmil naanị. The Netherlands bụ otu n'ime ewu ewu na-adọrọ mmasị ndị njem nleta n'ụwa. E ị pụrụ eche n'ịdị jụụ nke eke gburugburu n'ebe ndị dị n'eluigwe. Ndị e nwere nnọọ enyi na enyi na mma. Ị nwere ike mfe inweta ezumike mgbazinye ụlọ ọrụ. Ị na-ahọrọ dị ka mgbazinye ezumike obibi,-enyere gị aka iji belata-eri nke ọnụnọ gị. 1. Volendam One nke ama njegharị mma Netherlands bụ Valendam., Ebe anyị nwere ike na-ese foto na ejiji 'londo' ala ochie akwụkwọ ọkụ azụ. Ee, n'oge gara aga Volendam bụ a azu obodo, ma ugbu a ghọọ otu n'ime ndị na-adọrọ mmasị n'ihi na mba ọzọ njem nleta na ịga na Netherlands. Volendam-emi odude ke Ijsserlmeer n'ókè n'Oké Osimiri North mmiri. Ọ bụrụ na site Amsterdam Schipol International Airport bụ banyere 30 km na si n'obodo Amsterdaam ya onwe ya bụ banyere 20 km. Mbụ Volendam bụ na ọdụ ụgbọ mmiri nke ebe Edam, a cheese-amị obodo dị na Netherlands. Mgbe Edam ewu ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, Volendam ahụ wee daa pụọ ​​ma hiwere n'ime a azu obodo Volendam. Ikuku na ụlọ na Volendam ahụ mara mma, dị ọcha na ọma nọgidere na-enwe. Ọ bụ ezie na obere obere ụlọ na ọnụ, ukwuu anya nwe nke ụlọ ga-enwe na-elekọta ụlọ na lingkungannnya ọma. N'oge gara aga, 2. Keukenhof, Lisse Otu n'ime njem nleta na-adọrọ mmasị na Netherlands nke bụkwa uru ileta bụ Keukenhof, na nlegharị anya dị ka botanical ubi ma ọ bụ ifuru ubi. Dutch nkiri onye a emi odude ke obio nke Lisse, Keukenhof-emi odude ke n'ebe ndịda nke Netherlands, ya bụ na obodo nke Lisse, banyere 30 nkeji bọs si Amsterdam. Park na otu ebe nke mkpokọta 80 hectare, nke a bụkwa ndị kasị ibu ifuru n'ogige ke Europe, n'ihi ya, e dubbed n'ogige Europe. Ọ bụghị ihe ijuanya Keukenhof aghọwo otu n'ime ndị kasị ewu ewu njem nleta ebe ke Netherlands. Dabere na ọmụma m nwetara, ọ bụla mmiri karịrị nde mmadụ asaa okooko osisi e bred na-adọta ndị ọbịa. Ọ ga-kwuru na ọ bụghị nanị tulips nwere ike na-enwe, kamakwa iche iche nke okooko osisi ndị dị otú ahụ dị ka hyacinths, daffodils, ọbụna orchids. Ihe karịrị 800,000 ọbịa si n'ụlọ na mba ọzọ na-abịa na nke a ogige kwa afọ. N'ihi na ndị hụrụ okooko osisi na ndị hụrụ nke foto, 'amanyere bụ iwu' iwu ileta Keukenhof. Ma hụ na ị mee ka a igwefoto weghara ịma mma nke a ifuru ubi. 3. Canal Irughari, Amsterdam Amsterdam bụ kasị gara-aga n'ebe Europe na ọtụtụ nde ndị ọbịa na-abịa inyocha ndị mara mma obodo kwa afọ. Nke a bụ nnọọ nke ọma-zubere n'obodo, na narị afọ nke 17 obodo bụ akụ na ụba center nke ụwa na taa ndị ọzọ isi obodo nke Europe. Nke a abụghị nnọọ nnukwu obodo niile obodo isi na-adọrọ mmasị na-mfe inweta ụkwụ. Obodo a bụ a zuru okè ngwakọta nke akụkọ ihe mere eme na oge a na ije. Obodo bụ mpako nke na gburugburu ebe obibi emede na-emesapụ aka. Statistically na-ekwu okwu m na-adịghị kpọmkwem data, ma obodo a emewokwa ihe karịrị ihe isi obodo nke Europe na ọnụ ọgụgụ nke ịnyịnya ígwè, ọwa mmiri, àkwà mmiri,-eme ihe nkiri, ahịa wdg The kasị mma oge gara Amsterdam The kasị mma oge gara Amsterdam bụ July na August, ruru ka ihu igwe n'oge ọnwa ndị kasị mma. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ókè, Amsterdam bụ ebe maka ọbịa ofụri isua. Ọbụna na-eleta Amsterdam ke offseason bụ inwe ya uru dị ka ị ga-ahụ nnukwu ego na niile ụgbọ elu, hotels ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na Amsterdam ị ga-ahụ a ọnụ ọgụgụ nke ememme na ihe omume na-anọgide na-ewere ọnọdụ ofụri isua. Na Amsterdam, Netherlands, e nwere tour tinyere Ọwa mmiri nke bụ nnọọ nnukwu maka njem nleta. Tour agwa njem nleta na-achọpụta na ikuku nke obodo Amsterdam tinyere ikpere mmiri. Aha nke tour na arịawo nke a bụ Amsterdam Canal Irughari.
Laghachi isiokwu nke njem, oge a ga m agwa gị ụfọdụ nlegharị anya na a ga-gara ma ọ bụrụ na ị na-French State. Ndị na-esonụ ebe na-achọrọ na-abịa tour mgbe ị gara na French State 1. The eiffel tower, Paris N'ezie, ndị kasị njem nleta ntụpọ mbụ na-ejide ndị uche nke na ọtụtụ ndị na amanyere bụ iwu uru gị nleta bụ eiffel tower. N'ihi na ebe a a ọma ọtụtụ nde na nwunye chọrọ iji gwa Abigel, awara awara ịhụnanya, honiimuunu, wdg Eiffel tower onwe ya e wuru na afọ dị n'etiti 1887 sampat 1889 usọrọ a narị afọ nke French mgbanwe na a elu nke 275 mita. Agbanyeghị bụghị nyesel deh-abịa ebe a karịsịa mgbe eweta onye gị 2. Louvre, Paris Louvre aghọwo ndị kasị ama niile nkà veranda, na ọ bụ n'ụlọ ka nkà na akụkọ ihe mere eme karịa ị nwere ike ịma jijiji a baguette na. Leonardo da Vinci Mona Lisa (La Giaconda) ochi ọnụ ọchị enigmatic, ma ị ga-ahụ ihe karịrị 35,000 ọzọ iberibe ebe a, si antiques oge a nkà. Ego n'ọnụ: agbakwunye a oge a pyramid Louvre, na mma nke French nsọpụrụ na Ancient Egypt (na-eji dị ka ọnọdụ nke Da Vinci Usoro). 3. Obí nke Versailles, Versailles akpụ akpụ site na Paris na ime anyị na-ahụ Obí Versailles, ụlọ nke ndị eze na Queens nke France ruo mgbe La Guillotine na-isi-ha. Obí na-anọgide na ọ bụ n'ụzọ dị ebube na-emefu a ụbọchị na Ụlọ Nzukọ nke enyo, ndị dị ebube ubi na isi iyi na gburugburu a obodo nke nwere ụfọdụ ndị kasị mma ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe (gụnyere Paris). 4. French Riviera, Cannes na Monaco French Riviera bụ a mmasị osimiri ebe maka glitterati, na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị osisi osimiri na ụwa kụziri site na ụfọdụ ihe ndị kasị dara oké ọnụ hotels, erimeri ohere na shopping ndọpụ uche ka a hụrụ n'ebe ọ bụla na mbara ala. The ihu igwe dị ọkụ na oyi na-ekpo ọkụ na okpomọkụ, ma adịghị agbaghara Cannes Nkiri Ememme na kpakpando nke film ụwa ma ọ bụrụ na ị bụ na ihe niile kwere omume.
English bụghị nanị ama maka football naanị ya. Ma, n'ezie, ọtụtụ na-echekwa akụkọ ihe mere eme na ebe nke mmasị ileta. Ọ bụrụ na i nwere ohere na-abịa ka UK, ụfọdụ n'ime akpali ebe na-eme ihe ike ga-gara. 1. Tower nke London Tower nke London, emi odude ke ufọt London bụ a relic nke akụkọ ihe mere eme na-eje ozi eze na ezinụlọ ruo ọtụtụ narị afọ. E wezụga nke a Tower jekwara ozi dị ka a n'ụlọ mkpọrọ, ngwá agha na ọbụna a zoo. Ụlọ elu a bụkwa n'ụlọ ka eze na okpueze na ị pụrụ ịhụ. Ulo-elu bụ na-emeghe si Tuesday site Saturday-amalite na 10:00 na-18:00 obodo oge. Na n'ọnụ ụzọ ego nke 17 euro (banyere Rp..230 puku) ị nwere ike ịga otu n'ime ebe gara ọtụtụ ndị njem na nke a. 2. Tower Bridge, London A Ọdịdị na ndị kasị adọrọ mmasị saịtị na isi obodo, Tower Bridge ke London ka guzo na Thames ebe 1894 ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị recognizable akara na ụwa. Ebe i nwere ike ịhụ usoro na ọmụma ogwe kọwaa banyere nkà na ụzụ na-eji ihe karịrị afọ na-Tower Bridge aga. Ị nwere ike ịga ebe a kwa ụbọchị na-amalite ke 10:00 ka 18:30 na-akwụ 7 euro (banyere Rp.95 puku). 3. Big Ben ụlọ elu Big Ben ka anya ebe-aghọ ihe na akara ngosi nke obodo london. A nnukwu elekere ụlọ elu dị na ugwu nke Obí Westminster na London Nke a bụ nke atọ kasị elu elekere ụlọ elu dị na ụwa. Ọ bụrụ na ị na-London, i nwere ike na-atụ uche ohere na-ekiri elekere malitere uhuruchi na 31 May 1859 nke a. Na mgbede echiche nke 96.3 mita elu ga-ọzọ mara mma n'ihi na mma ọlaedo odo ọkụ nke Obí Westminster. Big Ben bụ otu ugboro ndị kasị ibu anọ-kwadoro elekere ụlọ elu dị na ụwa, ma mgbe ahụ meriri Allen-Bradley Elekere Tower na Milwaukee, Wisconsin, USA.
United Arab Emirates nwere ihe abụọ iconic obodo na-ekwu, ya bụ Abu Dhabi na Dubai. Njem Nleta uru ekesịpde Dubai n'ihi Dubai dabeere na ahia ọrụ na ego maka aku n'uba. Nke a bụ dị iche na Abu Dhabi nke ịdabere na mmanụ trading. Ya mere, ebe m weere a ndepụta nke ụfọdụ ndị kasị mma njem nleta nkiri na
1. Burj Al Arab Burj Al Arab bụ a okomoko nkwari akụ emi odude ke Dubai, United Arab Emirates. Burj Al Arab ụlọ, mere site Tom Wright, esịmde a elu nke 321 mita, 66 ala na bụ tallest ụlọ a na-n'ụzọ zuru ezu ji dị ka a na nkwari akụ. The ụlọ guzo n'elu ihe na wuru agwaetiti emi odude 280 m offshore Peasia Gulf. Burj Al Arab na-ekesịpde site Jumeirah. The nkwari akụ na-emekarị kwuru na dị kpakpando 7. Ọ na-atụle a ikwufe okwu ókè ndị na ubi nke njem. Ọ na-hụrụ ka a ụzọ "iti" ndị ọzọ hotels onye kpọrọ ya nkwari akụ kpakpando 6. 2. Jumeirah Beach Jumeirah Beach bụ ndị kasị ama osimiri na Dubai. Ụsọ oké osimiri a erukwa ruo 7 km, kewara asaa osimiri na osimiri ọ bụla ogologo maka kilomita. 2 Beach azọ na onye ọ bụla Jumeirah Park, na Wild Wadi. 3. Burj Khalifa Burj Khalifa bụ ihe atụ nke kasị elu na kasị nnọọ mma ije. Elu, 153 ala elu aka elu-igwe n'obodo Dubai. The ụlọ na-agụnye akụkụ nke nkwari akụ, ụlọ ọrụ ohere, Residential Ulo na ndị niile luxuries ụlọ ọrụ. 4. Palm Jumeirah Palm Jumeirah nwere ihe niile ị chọrọ na-enwe ihe ịrịba ezumike. Gụnyere aha ndị a ma ama n'ụwa nkwari akụ, njem nleta ebe bụ ịtụnanya, okomoko ejiji na ụlọ ahịa malls. Ma nnọọ na ị chọrọ iji zuru ike ma ọ bụ emikpu onwe gị na a ezumike zuru ntụrụndụ, nke a bụ n'ezie egwu ebe ileta. N'okporo ámá kafe Sandwiches Na Armenia Armenia bụ mba nke bụ n'ebe dị anya na mba nke Europe na otú na Turkey. Ọ bụ ezie na mba ahụ bụ nnọọ pụrụ iche, n'ihi na dị ka Onye Kraịst mbụ State na ụwa, ma na-ele mba na-adịghị hụrụ nri Armenia bụ bụghị ọtụtụ iche n'ebe ọtụtụ n'ozuzu dị ka nke mba nke Europe. Achịcha na Ofe efere, ma ọ bụ Onyinye-enwe mgbe nile mfe inweta. Ndị mmadụ na ebe a nwekwara mmasị na-eri mkpụrụ osisi
3. Armenia / Republic nke Armenia
5. bụ a ugwu ugwu na South Caucasus n'ógbè Eurasia. Emi odude ke edere edere akụkụ nke West Asia, n'ókè site Turkey ruo n'ebe ọdịda anyanwụ, Georgia n'ebe ugwu. Armenia bụ a unitary, multi-ọzọ, onye kwuo uche Burma:. Ebe ọ bụ na 9 narị afọ ruo mgbe narị afọ nke 13 obodo a bụ isi obodo nke Alaeze na-ekpere arụsị, Alaeze mbụ na-eme n'ógbè nke ga-Myanmar Modern. N'oge na narị afọ, e nwere ihe karịrị 10,000 ụlọ nsọ, na pagodas Yangon makwaara dị ka Rangoon, bụ mbụ isi obodo nke Burma (Myanmar) na isi obodo nke Yangon Region. Yangon bụ kasị ukwuu na obodo mba ndị bi na nke n'elu nde ise, ma ọ bụ na azụmahịa center agan City aha Bagan (a na-akpọbu na-ekpere arụsị) bụ obodo oge ochie (ochie obodo) emi odude ke ikpehe Mandalay na Myanmar / Burma. Ebe ọ bụ na 9 narị afọ ruo mgbe narị afọ nke 13 obodo a bụ isi obodo nke Alaeze na-ekpere arụsị,
9. bụ otu obodo onye bi bụ ọtụtụ Buddha okpukpe, ma n'obodo Yangon anyị pụrụ ịhụ ihe onwunwe nke Chọọchị Katọlik nwere nnọọ agadi. Saint Mary Katidral bụ otu agadi chọọchị Katọlik emi odude ke Hotel manifold ụlọ ohere Capsule, nke pụtara nanị a kwachie nke dị nnọọ mma nanị n'ihi na ụra rebaan pụrụ ịchọta ọtụtụ mba ndị dị otú ahụ dị ka Japan, Singapore ma ọ bụ Malaysia. The Capsule nkwari akụ na ị chọrọ ịhụ nightlife
13. a otutu ebe! n'ezie a otutu! Ugbu a na ị chọrọ ịhụ ebe a na-ekpebi ụdị ntụrụndụ? ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ntụrụndụ dị ka abalị ahịa na a dịgasị iche iche Ị pụrụ ịhụ site video n'okpuru (na mgbakwunye na nke foto dị ka e depụtara gara aga ibuotikọ), ebe a bụ na Nelson Street, mgbe ị na ụzọ ọpụpụ si MTR ojii na a ga-ntụziaka wepuÚ Transportation Macao si Hong Kong bụ mgbe ahụ kwa ụbọchị ma ọ bụ mgbe niile n'oge awa ọ bụla, n'ihi ya, ị na-adịghị echegbu onwe, na-aga ogologo tebulu, ịzụta tiketi, na-eche maka oge awa nke ọpụpụ, mgbe ahụ, gara Macau. N'ezie, ị chọrọ ịmata otú na-esi Macau si Hong Kong, akpa dee dị mfe. Transportation Macao si Hong Kong bụ mgbe ahụ kwa ụbọchị ma ọ bụ mgbe niile ọ bụla Macao Macao ma ọ bụ Macau bụ ugbua a obodo jupụtara ntụrụndụ, nke a na-emi odude ke n'ókè Guangdong n'ógbè ke n'ebe ugwu ma chee ihu na na South China Oké Osimiri. Obodo bụ agaghịkwa a na nzuzo na nkwado iwu ụwa ịgba chaa chaa Ebe Kasị Mara mma na World Ebe Kasị Mara mma na World Famous - World bụ sara mbara nke ukwuu n'ezie were otú ọtụtụ njem nleta na-adọrọ mmasị na ike ga-letara mba ọ bụla na ụwa na ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị chọrọ ileta otu otu n'ezie na-ewe a nnọọ ogologo oge, na ọbụna mgbe ọ bụrụ na ike. Mgbe ekwu okwu banyere njem nleta ebe n'ụwa na-bụ nnọọ iche iche nakwa nwere mma na-iche iche, ma e nwere ụfọdụ ndị na-eche na e nwere ụfọdụ na saịtị na ahụkebe mma ma ama n'ụwa, ma azụ na njegharị mma ezie mma nwere a-akpali nnọọ mmasị ma adịghị nwere ọtụtụ ndị ọzọ ọbịa pụtara obere maara nke ọma anya nke ụwa ọ bụghị ya?, na ọ bụrụ na ọ nwere otutu ọbịa si gburugburu ụwa pụrụ ijide n'aka na saịtị ndị n'ezie nnọọ ama. Ọfọn, ebe a bụ ụfọdụ ihe ndị kasị mma njem nleta ntụpọ ọmụma nwere ọ bụla ná mba dị ka sepengatuhan na m ama ama njem nleta tụrụ na ụwa.
17. Kuta Beach Bali na-emi odude ke edem usụk Denpasar, Bali isi obodo nke Republic nke Indonesia awade ezigbo mma nke n'ụsọ oké osimiri na a maara nke ọma na anya nke ụwa.
21. A na-akpọ Komodo Island bụ agwaetiti hụrụ ọtụtụ obere ụmụ anụmanụ na-echebe site ala nke Republic nke Indonesia. On Komodo agwaetiti na-emi odude ke Nusa Tenggara Islands kpomkwem ke n'ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Sumbawa na mgbakwunye na-anụ ụtọ eke mara mma nke agwaetiti nwekwara ike na-enweta eke mma nke anụ ọhịa na-adịkarịghị chọpụtara na dragons. Ugwu Bromo pụtara ịma mma nke ugwu + nke na-ekesịpde Ugwu Bromo n'ezie adọta obodo na mba ọzọ njem nleta.
23. Ugwu Bromo
25. ị pụrụ izute na Probolinggo, East Java, Indonesia. 2. Japan Ugwu Fujiyama Ugwu Fuji, emi odude ke ókè-ala nke Shizouka na Yamanashi Prefecture bụkwa na-akpali ileta maka njem nleta. Ugwu na nwere e ji mara na ọgwụgwụ na a oyi akwa nke ice ahụ bụ ndị kasị mma njem nleta tụrụ na ụwa ma ama. Kasị mma ebe ke World Famous
29. A ozugbo n'ogige mara mma jupụtara na okooko osisi na-ahụkarị nke Japan mere a ọhụrụ ikuku n'ime a njem nleta na-akpali nnọọ mmasị. Ueno Park bụ nnukwu ihe ubi nke a na-emi odude ke Tokyo Japan ma ọ bụ otu nke ama njem nleta tụrụ na ụwa.
33. The nsụda mmiri nwere nnọọ nnukwu pụtara ịma mma maka ọbịa. Waterfall na-emi odude ke mba ókè-ala n'etiti US na Canada bụ a ma ama njem nleta ntụpọ na ụwa na ọtụtụ ndị ọbịa na-achọ ịhụ mma nke nsụda mmiri bụ nnọọ ịrịba ama. Ukwu kaniyon Ukwu kaniyon bụ nnukwu kaniyon kere site Colorado Osimiri. Nke a njem nleta ntụpọ bụ a nnọọ ama njem nleta ntụpọ na mgbe gara site ọbịa si dị iche iche Negar, n'ihi na ọ na-ele ịtụnanya eke mara mma afọ agaghị eju ma ọ bụrụ na-eleta ndị a na-adọrọ mmasị nanị otu ugboro. Ele Canyon ndị kasị mma njem nleta ebe na-esonụ America bụ ele Canyon, nke a kaniyon bụ a njem nleta ebe bụkwa nnọọ ama na anya nke ụwa, na ịma mma nke mgbidi na-udo dị ka anyanwụ ụzarị-eme ka ụlọ na n'ime-aghọ nnọọ mara mma ma na maa mma. Ele Canyon-emi odude ke Page, Coconino Country, Arizona, United States.
35. Lake District Njem Nleta nkiri na UK a bụ ugwu nke nwere nnukwu ọdọ mmiri, ọtụtụ ndị njem na-abịa Njem Nleta dị ka Lake District na UK. Cambridge ebube ikuku ke Cambridge UK na a echiche nke osimiri na oge ochie ụlọ na-ka ọma nọgidere na-enwe.
39. Ọ bụrụ na n'ihi Thailand e nwere ọtụtụ ntụrụndụ na-enye pụtara ìhè eke mara mma na ma ama n'ụwa otu n'ime Koh Chang. Yag mmiri ogige e nnọọ akarị n'ọtụtụ n'oge a Thailad ọbịa si gburugburu ụwa, n'ihi na nke ịma mma nke ebe bụ jụụ na udo na-eme ka ndị njem na-eche n'ụlọ na njem nleta ntụpọ. Koh Samui na Koh Samui bụ a njem nleta ntụpọ na-na-dọtara ọtụtụ mba ọzọ njem nleta karịsịa n'oge okpomọkụ na-ọtụtụ njem nleta na-aga ebe. Mong Kok bụ kasị zuru ezu shopping na ihe siri ike
43 The mmalite nke ahịa, ịzụ ahịa ruo residential ebe, na-eleta Mongkok